Guddoomiye ku-xigeenkii Gobolka Mudug Farxaan Cali oo qarax lal beegsaday
November 8, 2011 - Written by
Gaalkacyo:-Waxaa saaka qarax miino lagu weeraray guddoomiye ku-xigeenkii gobolkaMudug Farxaan Cali Xirsi xili uu marayey wado marta gurigii uu deganaa , qaraxmiinada ah ayaa waxaa ka badbaadeyy guddoomiye ku xigeenka Gobolka Mudug balse waxaa dhaawac fudud soo gaaray qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo burbur gaaray gaarigii uu watay.
Goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray ciidanka Booliska ee magaalada Gaalkacyo waxaan ay ka bilaabeen howl gal ay ku raadinayaan ciddii fulisay qarax waxaan ay xireen jidadka ka dhow goobta qaraxu ka dhacay, Saraakiisha Ciidanka Booliska iyo kuwa Sirdoonka ayaa diiday in ay saxaafada wax faahfaahin ah ka siiyaan howl galka ay wadaan waxaan ay ku gaabsadeen in ay dib ugu warami doonaa saxaafada.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa maalmahaan waxaa ay ka nasatay qaraxyo iyo dilal qorshayn oo lala beegsado masuuli yiinta maamulka Gobolka Mudug iyo weliba dadka waxgaradka ah ee ku nool magaalada. Dilalka iyo qaraxyada ka dhac magaalada Gaalkacyo xaafadaheeda ayaa waxaa ay yihiin kuwa siyaaseed iyo aanooyin qabiil oo isku jira iyadoo arrinkaasna ay soo abaabulaan kooxo ku sugan gudaha magaalada oo qaarkood la tuhunsan yahay in ay ka danbeeyaan dilalka iyo qaraxyada ka dhaca magaalada. Qarax kan oo kale ah ayaa 23 bishii September waxaa magaalada Gaalkacyo lagula beegtay guddoomiyihii Gobolka Mudug ahna duqa magaalada Gaalkacyo Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay walow uu qaraxaas ka badbaaday isaga iyo ilaaladii la socotayba.
262,772 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress